မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်လေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခု မျှဝေလာတဲ့ တုတု – Burmese.asia
Homepage / Celebrity / မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်လေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခု မျှဝေလာတဲ့ တုတု
မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်လေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခု မျှဝေလာတဲ့ တုတု
လတ်တလော လူမှုကွန်ရက်မှာ အများဆုံးတွေ့မြင်နေရတဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်တစ်ခုကတော့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်လေးတွေရဲ့ သေဆုံးမှုပါ။ ကမ္ဘာ့ရှားပါးမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် အကောင်ရေ(၈၀) အောက်သာ ကျန်ရှိတော့တာမို့ ဒီထက်ပိုပြီး မသေအောင် ဂရုစိုက်ကြရမှာ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပေမယ့် အသိဉာဏ်မဲ့သူတချို့ရဲ့ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရခြင်း၊ ရှော့တိုက်သတ်ခြင်းခံနေရကြောင့် အကောင်ရေ တဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးတုန်းလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်လေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက် အကုန်ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကြဖို့ လူမှုကွန်ရက်မှာ စာတွေဖြန့်ဝေနေကြသလို ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်ဆောင်းဝတ်ရည်မေကလည်း အစီအစဉ်တစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
“တိုတိုနဲ့လိုရင်းပဲရေးပါ့မယ်နော် ။ဒီ Post လေးကို လူတစ်ယောက်ကနေ စပြီး လူအများမြင်နိုင်အောင် sharing လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ Dolphins လေးတွေဆိုတာ ချစ်စရာရေနေ နို့တိုက်သတ္တဝါလေးတွေပါ ။ တစ်ခြားသော ရေနေသတ္တဝါတွေနဲ့လည်းမတူဘဲ intelligence ပိုရှိပြီး လူတွေနဲ့ Friendlyဖြစ်အောင်နေတတ်တဲ့ သတ္တဝါလေးတွေပါ ။ Dolphins လေးတွေ အရွယ်ရောက်လာဖို့အချိန်ကလည်း အရမ်းကိုအချိန်ယူပြီး ကြီးထွားလာရလို့ ဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမှာလည်း ပိုနှမျောရပါတယ်ရှင်။ ဒီလိုနို့တိုက် သတ္တဝါလေးတွေ ဆုံးရှုံးနေရတာကလည်းသူတို့ထပ် အသိဉာဏ်အများကြီး ပိုရှိလှတဲ့ ကျွန်မတို့ လူသားတွေကြောင့်ပါ ။ အခုမျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့လင်းပိုင်လေးတွေကိုလည်း ထပ်မဆုံးရှုံးရအောင် အားလုံးပဲ ဝိုင်းဝန်းပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေချင်ပါတယ်ရှင်။ ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင် ။
အားလုံးဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြရအောင်ပါ” ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့တဲ့အပြင် နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာ လူအများစုဆီကလက်မှတ်ကောက်ပြီး ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်အရေးယူမှုတွေကို တောင်းဆိုဖို့ ပညာရှင်များစွာတိုင်ပင်ပြီး campaign လေးတစ်ခုစီစဉ်သွားမယ့်အကြောင်းမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ လင်းပိုင်လေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Irrawaddy Dolphin Awareness campaign ဆိုတဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေ့ခ်ျလေးကို Like လုပ်ကာ စောင့်ကြည့်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အပြည့်အဝလိုအပ်နေတဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်လေးတွေအတွက် တုတုနဲ့အတူ တစ်တပ်တစ်အား ဝိုင်းဝန်းကူညီလိုက်ကြရအောင်နော်။
Previous post သထုံမှာ မိုးအဆမတန်ရွာသွန်းပြီး မြသပိတ်တောင်တက်ကားလမ်း မြေပြိုကျ
Next post ဂူအတွင်းမှာ တရားအားထုတ်နေရင်း (၃ . ၈ . ၂၀၂၀) ရက်နေ့ က ပေးပို့လာတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ စာ